Topnews:Wasiirka Amniga K/Galbeed oo goor dhow faah faahiyay dagaalkii kadhacay Bokool – idalenews.com
Topnews:Wasiirka Amniga K/Galbeed oo goor dhow faah faahiyay dagaalkii kadhacay Bokool
Idalenews:- baydhabo Dagaalka u dhexeeya Maleeshiyaad katirsan koxda Argagixisada ah ee Al-Shabaab iyo maleeshiyaad kale oo daacad u ah Mukhtaar Roobow ee ka socoda gobolka Bokool ayaa maalmo jirsaday, iyadoo dagaalkii ugu dambeeyey lagu soo waramayo in jab xoogan uu ka soo gaaray kooxihii argagixisada ee weerarka soo qaaday.
Dagaalka oo ay ka qeyb qaateen ciidamo katirsan kuwa Dowlad Goboleedka K/Galbeed ayaa horseedey in ciidamada maamulkaasi ay la wareegaan dhamaan deegaanadii ay weerarka ku soo qaadeen maleeshiyaadkaasi, sida ay sheegeen mas’uuliyiin maamulkaasi katirsan.
Wasiirka Amniga Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Xasan Xuseen (EElay) ayaa xaqiijiyay in ciidamadoodi ay haatan gacanta ku hayaan Ammaanka goobihii lagu dagaalamay,Abuu Mansuurna uu weli ku sugan yahay deegaankii uu joogay.
“Sida aan ognahay Mukhtaar Roobey 3 sano ka hor ayuu ka baxay maleeshiyada Shabaab, kadib markii ay isku qilaafeen arrimo la xiriira in la joojiyo dhibaatooyinka sii kordhaya ee bulshada, intaasi kadib Abuu Mansuur wuxuu soo aaday deegaankii uu ku dhashey, mar hore ayuuna ka baxay Shabaab, hadii uusan ka bixin ma soo weerareen koxda Alshabaab”, Ayuu yiri Wasiirka Amniga K/Galbeed.
Ujeedada ay u ga qeybqaateen dagaalkaasi ayuu ku sheegey in ay tahay, in ay ka soo horjeedaan in maleeshiyada SHabaab ay xoog ku muquuniyaan qofkasta oo nabadda u soo dhawaada, islamarkaana ay ka go,antahay in ay ka hortagaan kooxahaasi.
Ugu dambeyn wasiirka wuxuu sheegey in Mukhtaar Roobow uu leeyahay aqtiyaar,uuna joogo deegaankiisa, maadaama aanu hadda kamid ahayn Alshabaab, isagoo intaasi ku daray in meel 20 KM ay kala joogeen ayaga iyo Roobow balse uusan wax dhaq dhaqaaq ah sameynin, balse ay garab siiyeen markii ay arkeen in kooxda Alshabaab ay soo weerareen.
Deg deg: Mooshin ka dhan ah Madaxweynaha Hirshabeelle oo socda
Mo Farah oo Tartankii looga guuleystay Orodka 5,000M